2016 နှစ်သစ်လက်ဆောင်(လူတယောက်တည်း ကားခြောက်စီးတရားတော် -ယောဆရာတော်ကြီး) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Buddhism » 2016 နှစ်သစ်လက်ဆောင်(လူတယောက်တည်း ကားခြောက်စီးတရားတော် -ယောဆရာတော်ကြီး)	8
2016 နှစ်သစ်လက်ဆောင်(လူတယောက်တည်း ကားခြောက်စီးတရားတော် -ယောဆရာတော်ကြီး)
Posted by padonmar on Jan 1, 2016 in Buddhism, My Dear Diary | 8 comments
လူတယောက်တည်း ကားခြောက်စီးတရားတော် (ယောဆရာတော်ကြီး-ဓမ္မဗျူဟာ ဆုနှင်းပွဲ 31.10.2015)
-အရှိ၏အောက် အသိရောက် ၊
တိမ်းမှောက် လူက ရှုံး၍သွား။
-အဆိုးကို နိုင် အကောင်းပိုင်ကာ၊
ကား ခြောက်စီး ဥပမာ (၁) မိမိခန္ဓာ စီးသောခါ သိက္ခာပြည့်အောင် သတိထား။
(၂) ကိုယ့်ဆွေမျိုးမှာ စီးသောခါ မေတ္တာရအောင် သတိထား။
(၃) ပစ္စည်းဥစ္စာ စီးသောခါ ကောင်းတာရအောင် သတိထား။
-သုံးတာ ပေးတာ ပျောက်ပျက်တာ
(၄)အတတ်ပညာ စီးသောခါ ကောင်းတာ မြင်အောင် သတိထား။
(၅)ဒုက္ခများစွာ စီးသောခါ ပညာရအောင် သတိထား။
(၆)ကိုယ့်ကိလေသာ စီးသောခါ ပညာရအောင် သတိထား။
ဆရာတော်ကြီးက ယနေ့ခေတ် လမ်းတွေပေါ်မှာ ကြပ်နေတဲ့ ကားတွေထက် ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ကြပ်နေတဲ့ ကိလေသာတွေက ပိုဆိုးပါတယ်တဲ့။ဒါ့ကြောင့် ကိလေသာမြူအမှိုက်တွေကို ကားခြောက်စီးထဲက အဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ နောက်ဆုံးကားနဲ့ တင်စားပါတယ်။
ကိလေသာကားကြီး ပိတ်ဆို့ မနေအောင် ပညာလမ်းတွေ ပွင့်သွားအောင် ကြိုးစားဖယ်ရှားကြပါစို့။
kai says: နှစ်ကူးကဒ်ပါဗျိုးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
alinsett says: .ကောင်းလိုက်တဲ့ ပုံပမာလေး….
E-မြောက်မြောက် says: ဆာဒူး ဆာဒူး ဆာဒူး
အာလူး ဏှာဘူး သာကူး
kai says: အသိမိတ်ဆွေတယောက်.. နှစ်ကူးအိမ်ရှင်းတာမှာ.. စာအုပ်တွေပါရှင်းတာ.. သွားယူလိုက်သမို့.. စာအုပ်.. အုပ်၁၀၀လောက်ရလာတယ်..။
ဘာသာရေးစာအုပ်တွေအများင်္ကြီး…။ အစစ် ပိဋကိတ်၃ပုံ စီဒီပါ ရလာသေး..။
အမတော်နဲ့ဆွေးနွေးချင်သား..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: ငင်…ကြောက်ပါဒယ်။သာမီး အပါဘူး။
ဦးကြောင်ကြီး says: ခိုနီဒုံ ခိုပြာဒုံ ခိုဝါဒုံ ခိုစိမ်းဒုံ ခိုဖြူ ဒုံ ခိုနက်ဒုံ …. သူတယောက်ထဲ ၆မည်ရ အာတီဒုံ
Mike says: .နှစ်သစ်ဆုတောင်းလှလှလေးအစား
padonmar says: ကျေးကျေးမိုက်